विचार Archives - Jhapa Times
Post date ३० असार २०७८, बुधबार ०८:३३
No Comments on ‘हाय गर्मी’
बाहिर मिलिजुली मिटर पानी परिरहेको थियो । भित्र गर्मीले हुटहुटी मचाएको कुरा सबका अनुहारले बताइरहेको थियो । गौरादहबाट निस्किएको माइक्रो २ घण्टा बित्दासम्म जिल्ला छोड्न सकेको थिएन । यस्तो जाम मैले ठ्याक्कै १२ बर्ष अगाडि कलंकी नागढुङ्गामा खेपेको थिएँ । त्यतिबेला गाडिको जाम लामलस्कर भएको थियो तर आज गर्मीको जाम ट्राफिकको पहिरनमा ताराबारी ढाटमा थियो । गर्मी छल्न माहिर हजुरआमा आइज लुखुरी आइज भनेर सित्तल बोलाउथिन् तर गाडी भगाउन ड्राइभर दाइले जानेनन् । उनिसँग लुखुरी जस्तो तोड छैन । वास्तवमा उनले नजानेका हैनन् , ढंग अलि बिग्रेर मात्र नसकेका हुन् ।
एउटा अध्याय अधुरो लेखेको बर्षौं भैसकेको छ । त्यसलाई पूरा गर्ने एउटा मात्र उपाय यात्रा । अ जर्नी टु द एज अफ वेस्टर्न टेरिटरी फ्रम द एज अफ इस्ट्रन टेरिटरी । तर एउटा यात्राले जिन्दगीभर कहिल्यै यात्रा गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने भान भएको छ । हाय गर्मी – जिन्दगी एउटा यात्रा हो भन्ने म आज यात्रा गर्नु नपरोस् भन्दैछु । यसमा दोष कसको ? ४०० मा किन्न मिल्ने प्रशासन ? २०० मा बिक्ने ट्राफिक प्रहरी ? आठाना लुटेर चाराना बचाउने दाउमा फनफनी घुमाउने ड्राइभर दाइ ?
यात्रुबाहक हायसले यात्रुहरुको एक बोरा चामल बोक्नु नौलो कुरा हैन तर ट्रान्स्पोर्ट अन्तर्गतको ट्रकले जसरि गाडी भर्नु पक्कै गलत हो । तीन गुना बढी मूल्य तिरेर यात्रा गर्ने मजस्ता १३ जना अरु यसमा केही बोल्न सकेनन् । सबैलाई कुनै हालतमा पनि पुग्नु थियो ।
जमाना यति अगाडि छ म के भनौं । जसरि आमालाई हरेक औसधि थाहा हुन्छ त्यसैगरी बुद्धिजीवीहरुलाई कुनैपनी कुराको स्तर कसरी बढाइन्छ भन्नेकुराको ज्ञान हुन्छ । जान्नेबुझ्नेहरु त अझ आफ्नो बिहेको पार्टिमा बचेको रु ८०० को गोल्डेन ओक राखेर छोराको ब्रतबन्धमा ब्ल्याक लेभल भन्ने गर्छन् । रक्सी जति पुरानो उति राम्रो रे । हाय गर्मी – समय भनेको प्रोसेस हो नबुझेकाहरुलाई म के भनौं ।
गाडी खाली फर्कनुपर्ने भएर बढी भाडा उठाएका हुन् अरे । मैले त सहज परिस्थितिमा पनि रित्तै गाडी दौडिएको देखेको छु । त्यतिबेला त महँगो शुल्क उठाउदैनन् त । आखिर मौकामा चौका हान्न त हामी कसैले पनि छोड्दैनौं । अझ कहिलेकाही त चौका रकेटको स्पिडमा उडाउछौं । रकेटको पुछरको आगोले अरुलाई कति गर्मी दिन्छ हामीलाई त्योभन्दा धेर चासो कति प्रतिफल मिल्छ भन्ने रहन्छ । हाय गर्मी – धार लगाउन आरनको ताप खेप्नै पर्छ भनेर हाम्रो मानसपटलमा पहिलेनै भरिएको छ । र त हामी गर्मी सहन्छौं । लुटाराहरुको गर्मी ।
लमजुङको यात्रामा मलाई गुगल म्यापले घरिघरी साथ दिएको थियो । काठमाडौका कुनैकुनै कार्यलय खोज्दा घरिघरी यसैको साहारा छ । पठाओ र टुटललाई त भरपुर साथ दिएकै छ तर झापा टु काठमाडौ एक्स्प्रेसले पनि गुगल म्याप हेर्दै दौडनुपरेको अवस्था कस्तो होला त ? म भन्छु नि कस्तो हुन्छ । यात्रुहरुलाई पीडा हुन्छ । ड्राइभरहरुलाई बाहाना हुन्छ र थोरै तलमाथी भएको खण्डमा ट्राफिकलाई मज्जा आउँछ । हाय गर्मी – यस्तो पिडादायी यात्रा गर्नुपर्छ पहिलेनै भनिदिएको भए हामिसँग अरु बिकल्प थियो त ।तिम्रा गाडी मात्र त थिएनन् होला नि ? काठमाडौं भित्र माइक्रोमा उभिनुपर्दाको पीडा मैले लङ जर्निमा पनि महसुस गरें । ठ्याक्कै त्यस्तैगरी खुट्टा टेक्ने ठाउँको अभाव । कृतिम अभाव ।
दुइटा गाडी भाग्यो तँलाई त चौकी लैजान्छु भनेको प्रहरी साँच्चै इमानदार लाग्यो । उसको इमान झरिमा कमाई नभएकाले रिष बनी पोखिएको रहेछ । एउटा बाघे नोट देख्दा हेर त चार जना छौं पो भन्छ । २०० कित्ते प्रहरी आखिर दोषी को ? अंशबण्डा पुग्ने भएपछी गाडी छुट्छ । हाय गर्मी – २०० को ईमान बोकि आखिर कसरी बन्छ मेरो देश ?
पानी पानी अनि गर्मी गर्मी । छलकपट र लेनदेन गर्दै २ बजे गाडी खाना खान रोक्छ । अघिल्लो दिन यतिबेला युरो कपको लुफ्त उठाइरहेको थिएँ । चियाको चुस्की लिँदै । यतिबेला ठुस्की लिँदै गाडिबाट लखतरान ज्यान पुरानो सुटकेस जसरी भुइँमा झार्छु । धुलोको बदला गर्मी झर्छ । उफ ! अफ्ट्यारोमा बसेको शरिरको दुखाई झर्छ । यति दुख खेतमा गर्दो हुँ त बर्षभरी पुग्ने धान फल्दो हो । तर मलाई सपनाको सानो संसारमा पुग्नु जो छ । जहाँ एउटा कोठामा पुरै घर छ तर घर नै चैं छैन । हाय गर्मी – अब कति पेट भोको रहँदो छु । यो बेबखतको चामल नखाए के हुन्छ र ? उसैपनी यहाँ खानाको नाममा खाए खा नखाए घिच भनेर थालभरी केके दिन्छन् । न पेटलाई पुगोस् , न स्वास्थ्यलाई ।
पेट्रोलको भाउ बढ्छ र बिरोध हुन्छ । स्टन्ट गर्नलाई तेल सस्तो किन चाहियो ? महँगीको पिर भए त माइलेज दिने स्प्लेन्डर मात्र गुड्नुपर्ने हो त हाम्रो सडकमा तर सबैलाई यहाँ देखाउनुछ पैसाको गर्मी । सान ए सौख रहेगा तो लोग तुम्हारी कदर करेङ्गे वर्ना मर्नेसे पेहेले लोग हाल नहि पुछते । हाय गर्मी – खाने तेल त अब हामिले छुन नमिल्ने गरि पर सरेको छ । खैर केही छैन उसिनेको कुरा खानु स्वस्थकर छ । स्टन्ट देखाइएन ब्भने सरकारले बाटो किन बनाइराख्नु । उठ भैरे उठ । जा माइतिघरतिर फेरि एकपटक तेरो तेलको गर्मी बढेको छ ।
नेपाल बन्दैछ्को नारा बोकेर स्विसमा पहाड बनाउँदै छन् । सगरभन्दा अग्लो । र नेपालमा टेलिभिजन च्यानलले ताली र गालिमा भोट गर्न लाउँछ । हाम्रो जनमतको कदर नभएको बेला यस्ता बेतुकी मतको कोइ काम छैन । सामाजिक संजाल कहिलेकाही यस्तरी तात्छ मानौं क्रान्तिको उत्कर्ष यहि हो र अब आमूल परिवर्तन भैहाल्छ । हाय गर्मी – धरहराको उचाई बाट नदेखिएको दोहन , अपहरण , भ्रष्टाचार , बलात्कार , कहर र आतंक अब बाघको टाउको देखाएर स्यालको मासु बेच्ने ठाउँमा कहिल्यै देखिँदैन । उनिहरुका आँखाका मात्र हैन चिन्तनको पनि पावर घटेको छ । यो देश अब यस्तै रहन्छ । यो देश अदालत , सिंहदरबार र माइतीघर घुमिरहन्छ ।
सुत भैरे सुत । घरमा गएर आनन्दले सुत । बाहिर गर्मी छ राजनीतिको ।
जीवनशैली देश प्रवास ब्यापार मनोरञ्जन मुख्य राशिफल विचार स्वास्थ/ शिक्षा
२०७७ माघ १३ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २६ तारिक मंगलबार यो राशि भएकालाई राम्रो छ
Post date १३ माघ २०७७, मंगलवार ०८:२७
No Comments on २०७७ माघ १३ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २६ तारिक मंगलबार यो राशि भएकालाई राम्रो छ
मिति २०७७-१०-१३ गते मङ्गलबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-२६, प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, पौषशुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, वैधृति योग,कौलव करण, चन्द्रमा मिथुन राशिमा।।
सूर्योदय बिहान ६:४४ बजे,
सूर्यास्त साँझ ५:२७ बजे।
गौरादह झापा : सम्पर्क नं- ९८४२१६५५८७
यूवा ज्यो.पण्डित नेत्र प्रसाद खनाल
नोट : ग्रहदशा हेर्ने , चिना टिपन बनाउन,वास्तु परामर्श सेवा, पुजापाठ, पुराण वाचन साथै ज्योतिष सम्वन्धि सम्पूर्ण कार्यकालागि अवस्य सम्झनुहोला ।
अनौठो कुरा खेलकुद जीवनशैली देश प्रवास ब्यापार मनोरञ्जन माैसम मुख्य राजनीति राशिफल विचार स्वास्थ/ शिक्षा
२०७७ माघ ११ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २४ तारिक आईतबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Post date ११ माघ २०७७, आईतवार १२:२०
No Comments on २०७७ माघ ११ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २४ तारिक आईतबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-११ गते आइतबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-२४, प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, पौषशुक्लपक्ष एकादशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्म योग, वणीज करण उप्रान्त बिष्टि करण, चन्द्रमा वृष राशिमा।।
आज पुत्रदा एकादशीव्रत।
जीवनशैली देश प्रवास ब्यापार मनोरञ्जन मुख्य राजनीति राशिफल विचार स्वास्थ/ शिक्षा
२०७७ माघ १० गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २३ शनिवार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Post date १० माघ २०७७, शनिबार ०८:१५
No Comments on २०७७ माघ १० गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २३ शनिवार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-१० गते शनिबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-२३, प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२,सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, पौषशुक्लपक्ष दशमी तिथि, कृत्तिका नक्षत्र, शुक्ल योग, गर करण, चन्द्रमा वृष राशिमा।।
सूर्योदय बिहान ६:४५ मा
सूर्यास्त साँझ ५:२५ मा ।
२०७७ माघ ८ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २१ बिहीबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Post date ८ माघ २०७७, बिहीबार ०६:५०
No Comments on २०७७ माघ ८ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २१ बिहीबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-८ गते बिहीबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-२१, प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, पौषशुक्लपक्ष अष्टमी तिथि,अश्विनी नक्षत्र, साध्य योग,बालब करण, चन्द्रमा मेष राशिमा।।
सूर्योदय बिहान ६:४६ मा ,सूर्यास्त साँझ ५:२३ मा । तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
गौरादह झापा : सम्पर्क नं-९८४२१६५५८७
अनौठो कुरा जीवनशैली देश प्रवास ब्यापार मनोरञ्जन मुख्य राजनीति राशिफल विचार स्वास्थ/ शिक्षा
Post date ७ माघ २०७७, बुधबार ०७:१४
No Comments on २०७७ माघ ७ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी २० बुधवार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-७ गते बुधबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-२०,प्रमादी नाम संवत्सर श्रीशाके १९४२ सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु पौषशुक्लपक्ष सप्तमी तिथि १३:३७ बजेसम्म उप्रान्त अष्टमी तिथि, रेवती नक्षत्र १३:२४ बजेसम्म उप्रान्त अश्विनी नक्षत्र, सिद्धि योग,भद्रा(विष्टि)करण, चन्द्रमा मीन राशिमा १३:२४ बजेसम्म उप्रान्त मेष राशिमा।।
सूर्योदय बिहान ६:४६ मा सूर्यास्त साँझ ५:२२ मा।।
जीवनशैली देश ब्यापार मुख्य राशिफल विचार स्वास्थ/ शिक्षा
Post date ६ माघ २०७७, मंगलवार १०:४७
No Comments on २०७७ माघ ६ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी १९ मंगलबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-६ गते मङ्गलबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-१९,प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, पौषशुक्लपक्ष षष्ठी तिथि११:४८ बजेसम्म उप्रान्त सप्तमी तिथि, रेवती नक्षत्र १३:२४ बजेसम्म उप्रान्त अश्विनी नक्षत्र, शिव योग,गर करण, चन्द्रमा मीन राशिमा।।
Post date ४ माघ २०७७, आईतवार २०:१४
No Comments on वि.सं.२०७७ माघ ५ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी १८ सोमबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-५ गते सोमबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-१८,प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२, सूर्य दक्षिणायन शिशिर ऋतु पौषशुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि १०:२० बजेसम्म उप्रान्त षष्ठी तिथि,पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र ९:१२ बजेसम्म उप्रान्त उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र,परिघ योग,कौलव करण, चन्द्रमा मीन राशिमा।। तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
अनौठो कुरा कोरोना खेलकुद जीवनशैली देश प्रवास ब्यापार मनोरञ्जन माैसम मुख्य राजनीति राशिफल विचार विश्व स्वास्थ/ शिक्षा
२०७७ माघ ४ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी १७ आईतबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Post date ४ माघ २०७७, आईतवार ०६:१२
No Comments on २०७७ माघ ४ गते , ई.सं.२०२१ जनवरी १७ आईतबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-४ गते आइतबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-१७,प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, पौषशुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि ९:२१ बजेसम्म उप्रान्त पञ्चमी तिथि,शतभिषा नक्षत्र ७:४३ बजेसम्म उप्रान्त पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र,वरियान् योग,बब करण, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा।। तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
जीवनशैली देश ब्यापार मनोरञ्जन मुख्य राजनीति राशिफल विचार स्वास्थ/ शिक्षा
२०७७ माघ ३ गते,ई.सं.२०२१ जनवरी १६ शनिबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Post date ३ माघ २०७७, शनिबार १५:३७
No Comments on २०७७ माघ ३ गते,ई.सं.२०२१ जनवरी १६ शनिबार यस्तो छ तपाईंको राशिफल
मिति २०७७-१०-३ गते शनिबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-१६,प्रमादी नाम संवत्सर, श्रीशाके १९४२, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु,पौषशुक्लपक्ष तृतीया तिथि ८:५२ बजेसम्म उप्रान्त चतुर्थी तिथि, शतभिषा नक्षत्र, व्यतिपात योग, वणीज करण, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा।। तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
यूवा ज्यो।पण्डित नेत्र प्रसाद खनाल